झापामा घट्यो ड’र लाग्दो घ’टना, छोराले देखे यस्तो अवस्थामा आमाको ला’स (भिडियो हेर्नुस) – live 60media
झापामा घट्यो ड’र लाग्दो घ’टना, छोराले देखे यस्तो अवस्थामा आमाको ला’स (भिडियो हेर्नुस)
झापा – झापाको विर्तामोडमा अर्को एउटा दु’ख घ’टना घ’टेको छ । विर्तामोडको वडा नं. २ को चैतनबारीमा एक जना महिला मृ’त फेला परेकी छन् । उनी ४२ वर्षीया दिनु रजावंशी हुन् । मृ’तक दिनु आईतबार बिहान खेतमा मृ’त अवस्थामा फेला परेकी थिईन् । प्रहरीको भनाई अनुसार शनिबार बेलुका साँझ करिब साढे सात बजेको समयमा श्रीमान वीर बहादुरलाई खाना पुर्याउन भनी उनी घरबाट खाना बोकेर निस्किएकी थिईन् ।
साँझ खाना बोकेर निस्किएकी दिनु शनिबार रात भरी नै घर नर्फिएपछि उनको खोजी कार्य परिवारले गरि रहेको थियो । उनलाई खोज्ने क्रममा उनको श’व आइतबार बिहान खेतमा फेला परेको प्रहरीले बताएको छ । उनलाई कस्ले र किन मा’रेको हो भन्ने कुरा अनु’सन्धानकै क्रममा रहको पनि प्रहरीले बताएको छ । घ’टनाका विषयमा विस्तृत रुपमा छोरा भन्छन् हेर्नुहोस् पुरा भिडियो****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
रत्नपार्कमा ज्याेतिषी बनेर हात हेर्न बस्ने बाजेले युवतीलाई यसरी फ’साएपछि – पूरा हेर्नुहोस :जब ठ’गहरू ‘गुरुबा’ बन्छन्, व्यभिचारीहरू ‘बाबा’ बन्छन्,धू’र्तहरू ‘माता’ बन्छन्, दु’खी र चि’न्तितहरू ठ’गिन्छन् र लु’टिन्छन् । देशैभरि अन्धविश्वासका पसल चलिरहेका छन् । बाँ’झोपनको उपचार गर्नेनिहुँमा महिलालाई आफूसँग शा’रीरिक सम्बन्ध राख्न हौस्याउने मतिभ्र’ष्ट बाबाहरू छन् यहाँ । ज्योतिषशास्त्रको सामान्यजानकारी पनि नभएकाहरू ‘ज्योतिषपण्डित’को साइनबोर्ड झु’न्ड्याएर बसेका छन् । लु’टेरा बाबा र माताका काला क’र्तुत उतारेका छन् ।
अम्मर जिसीले सुन्धाराको आकाशेपुलमुनि साँघुरो सटर–कोठामा छ, ‘शिवशक्ति ज्योतिष फलादेश केन्द्र’ । दिउँसोको साढे ३ बजे केही महिलामात्र‘ज्योतिष’बाट उपचार पाउन बाँकी थिए । दिनहुँमहिलाको भीड लागिरहने यस केन्द्रमा आफूलाईप्रख्यात ज्योतिष बताउने टीका योगी कुँवरले‘ज्योतिष सेवा’ दिइरहेका थिए । लामो चुल्ठो पालेका उनलेएउटा कुर्सीमा आफ्ना गोडा बिसाएर नजिकैस्टुलमा एक अधबैँसे महिला राखेका थिए ।
महिलाको कपडाभित्र उनका दुवै हात स’लबलाइरहेका थिए । ती महिलापछि एककिशोरीको पालो आयो । उनको पनि कपडा छिचो’लेर पेटतिरबाट ज्योतिषका हात सल’बलाउन थाले । ती किशोरी काउकुतीले भुतु’क्क भइन् । केकाउकुती मान्या, मोरी’ भन्दै टीकालेगाला चि’मोटे । पालो कुरिरहेका अन्य महिलासँगठट्टा गर्दै उनले आफ्नो काम जारी राखे ।
अर्की छोरी समाएर बसेकी ती किशोरीकी आमा छेउमै थिइन् । किशोरीलाई चण्डीमा हात राख्न लगाएर कसम खु’वाए ज्योतिषले, ‘अबदेखि बुवासँग रिसाउन्न । ठूलाले भनेको मान्छु । न’राम्रो संगत छोड्छु…।’त्यसपछि उनले किशोरीलाई कम्मरमा बुटी बानिदिए । र, शुल्क लिए, एक हजार रुपैयाँ । आधा घण्टाको बीच उनले चारपाँच जना महिलासँगयही प्रक्रिया दोहो¥याए । ‘मैले गाउँमै ज्योतिषविद्या पढेको हुँ,’ उनले शुक्रवार संवाददातासँगगाह्रो मानेर कुरा गरे, ‘यहाँ केन्द्र खोलेको १४ वर्षभयो ।
धेरै विधि हुन्छन् ज्योतिष उपचारका । धेरैलेविश्वास गरेर त अहिलेसम्म टिकेको छु । दिनमा कहिले पाँच सय त कहिले पाँच हजार रुपैयाँ कमाइन्छ । धेरैलाई निको पारिसकेको छु ।’उनको यो केन्द्रमा धाउने अधिकांश महिला हुन्छन् । अस्पतालमा बिरामीको जत्तिकै त्यहाँ पनि लामैलाइन बस्नुपर्छ । ‘डाक्टरकोमा धाउँदाधाउँदा है’रान परेर उहाँकोमा आएकी छु,’ उपचार गराउने एकमहिलाले भनिन्, ‘मलाई तडाक्टरको भन्दा गुरुबाको उपचारमा विश्वास लाग्छ ।
उहाँको झा’रफुकले पी’डा कम भएको छ । से’क्समार्फत उपचार’नयाँबानेश्वरस्थित संविधासभा भवनको सीधा अगाडि छ,महाकाली ज्योतिष तथा हस्तरेखा विज्ञान केन्द्र । यसका सञ्चालक हुन्, आफूलाई चर्चित युवा ज्योतिष रज्योतिषविद्यामा विद्यावारिधिको उपाधि पाएको बताउनेहरि खरेल । सधैँजसो मान्छेहरूको भी’ड भा’ड भइरहनेयो केन्द्र केही दिनदेखि बन्द छ । कारण,उनका कु’कृत्यहरू सार्वजनिक भए । विभिन्न रो’गको उपचारका लागि आफूकहाँ धाउनेमहिलालाई ‘मसँग सम्भो’ग गरेमात्र तपाईंको उपचार सफल हुन्छ ।
भन्ने सल्लाह दिएर आफ्नो यौ’न प्या’स पनि मेट्ने र पैसा पनि कु’म्ल्याउने ज्योतिष हुन् उनी । केही सञ्चारमाध्यममा उनको शो’षण सार्वजनिक भएपछि उनी अहिले सम्पर्क वि’हीन भएका छन् । केन्द्रको बोर्डमा लेखिएको छ, ‘कम उमेरमै देश विदेशमा प्रसिद्धि कमाउन सफल ज्योतिष हरि खरेलबाट मा’नसिक रो’ग, द’म, हातगोडा नच’ल्ने,बाथ, सुगर, महिलाको मासिक ग’डब’डी,सेतोपानी ब’ग्ने, कम्मर दु’ख्ने बि’रामीको उपचार ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
← सुत्नुअघि गणेश भगवानको दर्शन गर्दै तपाईले जान्नै पर्ने कुरा,व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने ?
प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरूले कुन देशको नागरिकता पाउँछन् ? →